Kontonka Kooxood ee ugu Wanaagsan Adduunka oo la soo Saaray | Dhaymoole News
Toddobaadyo ka dib markii lasoo gabogabeeyey horyaallada kala duwan ee xilli-ciyaareedkii 2021-22, waxa la sameeyey qiimaynta kooxihii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkii tegay, kuwaas oo safka hore ay kaga jiraan naadiyada Ingiriisku.
Real Madrid oo ku guuleysatay tartanka Champions League ayaa kaalinta saddexaad ku jirta, waxaanay soo samaysay sare u kac weyn marka loo eego heerkii ay sannadkii hore ku jirtay waqtigan oo kale, laakiin marka la eego guulaha ay gaadhay waxay taageereyaashu filanayeen inay ka sarrayn karto booska saddexaad.
Liverpool iyo Manchester City oo si weyn ugu dagaallamay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii tegay, ayaa ku jira kaalmaha sare, waxaana booska koowaad looga tanaasulay Liverpool oo ku guuleysatay FA Cup iyo Carabao Cup, sidoo kalena finalkii Champions League ay Real Madrid ku garaacday, halka Man City oo ku guuleysatay horyaalka Premier League ay kaalinta labaad fadhido.
Inkasta oo guul-darro 1-0 ah ay Real Madrid u xambaarisay finalkii Champions League ee Sabtidii lagu ciyaaray magaalada Paris, haddana kooxda tababare Jurgen Klopp ayaa ciyaar heersare ah muujisay, waana sababta ay kaalinta koowaad usoo gashay.
Qiimaynta 50ka kooxood ee ugu wanaagsan dunida waqtigan oo ay samaysay ClubElo, waxa ku jira 14 kooxood oo horyaalka Premier League ah, waana horyaalka kooxaha ugu badan ay kaga jiraan liiskan.
Kooxda tobanka jeer ee isku xigta ku guuleysatay horyaalka Bundesliga ee Bayern Munich ayaa kaalinta afraad kaga jirta liiska kooxaha ugu wanaagsan, waxaana ku xiga Chelsea iyo Ajax, halka Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham iyo Inter Milan ay dhamaystireen tobanka boos ee ugu sarreeya.
Waxa kaalinta 11aad u dhacday Paris Saint-Germain oo ku guuleysatay horyaalka Ligue 1, laakiin si niyad-jab ah wareeggii 16ka ugaga hadhay Champions League kaddib markii ay Real Madrid guul soo laabasho ah kaga gaadhay Santiago Bernabey.
Halkan kaga bogo 50ka ciyaartoy ee ugu wanaagsan dunida waqtigan: